ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “ရယ်ချင်ကြသူများ”
ကိုပေါ.. ဖတ်ပြီး မရယ်သွားပါဘူး.. ပြုံးသွားတယ်။ အဲ မထိန်းနိုင်ဘူး ရယ်လိုက်မိတယ်..။ ဟီဟီ (အဲ)
အင်း စပြောမဲ့လူရှိတော့လည်း ကောင်းပါ့။
သူများနိုင်ငံ စာအုပ်စာပေ ရှားပါးခိုက် သတင်းတို့ ဟိုသည်သိဖို့ ဘလော့ဝင်ပြီး ၁နာရီစ ၂နာရီစ ၁နေ့ကို ကောင်းကောင်းပေးချင်မိတဲ့အခါမျိုးဆို ပေါပေါတွေနှင့်ကြုံလျှင် ပိုဆိုးပါသေးရဲ့...။
(ထောက်ခံသည်လည်း မဟုတ် မထောက်ခံသည်လည်းမဟုတ် ကြုံကြုံနေရတာကို ၀င်ရေးသွားသည်။)
Biz as Usual ko paw . :-) :-) :-)
အင်း.. ကိုပေါကို လမ်းမှာတွေ့ ရင် ပြုံးပြီးတောင် နှုတ်မဆက်ရဲတော့ဘူး.. မျက်စိပေါက်ကို ကြည့်ပြီး ပြုံးတာကို ရယ်တာနဲ့မှားသွားမှာ စိုးရိမ်တယ်လေ..
မြန်မာလူမျိုး တင်တော့ မဟုတ်ဘူး ထင်ပါတယ်။ လူမျိုးခြားတွေနဲ့ စကားပြောတော့လည်း အရွှန်းမဖောက်ရင် ကြာကြာနေတော့ ပြောစရာစကား ရှားလာတတ်ပါတယ်။ နောက်လိုက် ပြောင်လိုက်မှပဲ ပိုရင်းနှီးတာမျိုးပေါ့။ Dale Carnagie ကလည်း မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်း ပေါချင်ရင် ပြုံးပါလို့ ဆိုထားတယ် မဟုတ်လား။ အစည်းအဝေးခန်းထဲမှာ ရယ်စရာ အမြဲ ပြောနေဖို့ မသင့်ပေမယ့် အရက်ဘားမှာတော့ ရယ်စရာ ပြောနေရတာ မဆိုးလှပါဘူး။ ကာလံ ဒေသံ ပေါ့။
ပြောဖို့ ကျန်သွားတယ်။ လူတစ်ယောက် ရယ်နေတာကို ကြည့်ရတာ မဲ့နေတာထက်စာရင်တော့ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပိုပြီး ကြည့်လို့ကောင်းပါတယ်။ :D :) :P
ရယ်စရာတွေ့ရင် တော်တော်ပျော်တဲ့ စာဖတ်သူပါ...။
သူတပါးကိုလည်း အစ၊ အနောက်သန်ပြီး ရယ်စရာ အဖြစ်အပျက်တစ်ခုခုဆို ခေါင်းထဲ အကြာကြီး ရောက်နေတတ်တယ်။ ပြန်ပြန်တွေးပြီး ပြုံးမိတတ်တယ်။
ရင်မောစရာအဖြစ်အပျက်မရှိပေမယ့် ငယ်ငယ်ကတည်းက အဲလိုပုံစံဖြစ်နေခဲ့တာ..။
** ဘယ်သူမှ ရိုက်မစစ်ပဲ တစ်ဖက်သတ်ဝန်ခံသွားပါသည်။
ဘာပြောရမှန်းတောင်မသိတော့ဘူး .. သူ့နေရာနဲ့သူပေါ့ .. အမြဲတမ်းရီစရာလုပ်ရင်လည်း လူမလေးစာသလို အမြဲကြီး တည်တဲ့ထားရင်လည်း အပေါင်းအသင်းနည်းနိုင်တယ်ထင်ပါတယ် .. အခြေအနေနဲ့ အချိန်အခါအလိုက် လိုက်လျောညီထွေနေသင့်တယ်ထင်ပါတယ် ..း)(ဒါလေးကတော့း)ခင်မင်မှုအထိန်းအမှတ်အဖြစ်သုံးနေကျမို့ ပြုံးပြသွားပါတယ် .. )
ဆြာပေါ".. ကျွန်ုပ်တို့ နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များဟု မိမိကိုယ်ကို ခံယူထားသူများလည်း ရုပ်တည်ကြီးများနဲ့ ရီစရာတွေ ပြောကြပါ၏။
ြmrt ပေါ်မှာ ရီကြတာပဲကွယ်..ရီကြပါစေလား.. ထွေရာလေးပါးစကားဆိုတာလဲ ကိုယ့်လူမျိုးချင်း ဘာသာစကားအခက်အခဲမရှိမှ ပြောလို့အားရတာမလား..
ကိုပေါရေ ... ငိုနေတာ မဲ့နေတာ နဲ့စာရင်တော့ ပြုံး ရယ်နေတာက ပိုကောင်းသလားလို့ ... ။
ဟာသဉာဏ်ဆိုတာကလဲ လူတိုင်းမရှိနိုင်သလို ဟာသရေးတတ်ဖို့ကလဲ ပိုခက်တယ် ထင်တာပဲ။ (ကျမ အထင်ပြောတာပါ)
ငိုချင်စရာတွေ တလှေကြီးရှိတဲ့ ဒီလူမျိုးဟာ ငိုချင်စရာတွေနဲ့ စိတ်ဖိစီးပြီး စိတ်ညစ် စိတ်ဓာတ်ကျမနေဘဲ အမြဲတမ်း ရယ်နေနိုင်တာ ပိုကောင်းပါတယ်။
လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ စာသင်ခန်းထဲမှာ အမြဲ tension ကြီးနဲ့ နေရတဲ့ ခံစားမှုကို ပေါ့ပါးသွားအောင် လမ်းမှာ သွားရင်းလာရင်း ရောက်တတ်ရာရာ ပြောဆို ရယ်မော နေကြတာနဲ့ တူပါရဲ့။
ရယ်ခြင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး Psychology Today မှာ ခုလိုရေးထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
Laughter reduces pain, increases job performance, connects people emotionally, and improves the flow of oxygen to the heart and brain.
ထောင်တန်တဲ့စကား ရယ်လိုက်လို့ ပေါ့သွားတာမျိုးကတော့ မကောင်းဘူးပေါ့။
ZT ပြောသလို ကာလံဒေသံနဲ့ ဆိုင်မယ် ထင်ပါတယ်။
ကိုပေါရေ- စာတွေ စုဖတ်သွားကြောင်း။
ကိုပေါ ရဲ့ စာရေးခြင်း အတက်ကိုတော့..ချီးကျူးပါတယ်။
ဘာပဲပြောပြော.. ကျမတော့..ပြုံးလိုက်အုံးမယ်။း)
ကိုယ်တို့ ကတော့ လူတွေ့လိုက်ရင် အတည်ပေါက်ကြီး နဲ့ဆူပုပ်သိုးနေတာ မျိူးထက် ဖော်ဖော်ရွေရွေ ပြုံးပြုံးရျွှင်ရျွှင် ဆက်ဆံတာမျိုးပဲကြိုက်တယ်.......
လူတိုင်းလဲ ဒီလို ပဲနေမှာ ပါ
ကြည့်ရတာ ကိုယ်မပျော်နိုင်လို့ သူများတကာတွေ ပြုံးပျော် နေကြတာ ကို မုဒိတာ မပွား နိုင်တာ ဖြစ်ရမယ်.....
စိတ်ဓာတ်လေး ပြင်စေလို ....
ကိုပေါ ပြောသလို ရယ်နေတာတော့ ကောင်းတာပေါ့ မောစရာတွေကြုံနေရတဲ့ မြန်မာပြည်အကြောင်း ကတော့ ကိုယ်တစ်ယောက်ထဲရယ်နေရရုံနဲ့တော့ မကောင်းဘူးပေါ့
တို့ကတော့ ရီရတာ သဘောကျသူပါ။ ဟာသကိုလဲ နှစ်သက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဟာသလုပ်တဲ့သူ ရေးတဲ့သူမှာလဲ ပါရမီရှိမှ ရေးနိုင်လုပ်နိုင်တာမျိုးပဲ။ မျက်နှာအမူအရာ မပါ စာနဲ့ ရေးတဲ့သူဆို ပိုခက်တယ် ထင်မိတယ်။ စာဖတ်ကြည့်ရင် သိသာပါတယ်။ တချို့ကျတော့လဲ မရီရဘူး။ ဇွတ်ပဲ။ အဲဒါဆိုရင်တော့ ကိုယ်ဖတ်ချင်ရာ ရွေးဖတ်ခွင့်ရှိနေတဲ့ ဘလော့ခေတ်ကြီးမှာ စာဖတ်သူက သူ့ဖာသာသူ ရွေးချယ်သွားကြတာပါ။ မခင်ဦးမေဆိုရင်တော့ တမျိုးပါ။ မမက ဟာသဥာဏ်လဲရှိတယ်၊ သူ့ကိုလဲ ဘာရေးရေး ချစ်ကြတယ်ဆိုတော့ မပြုံးဘဲကို မနေနိုင်အောင်ပဲ။
ကျမတို့ကျောင်းတက်တုန်းက လက်ကမ်းစာစောင်လေး တခု ကျောင်းသားတွေက လုပ်တယ်။ ကျောင်းသူတွေကို ချစ်စနိုးစ တဲ့ စာစောင်မျိုးပါ။ ကိုယ့်အချင်းချင်းပဲ သိတာမျိုး။ အစခံရတဲ့သူကလဲ ပျော်လို့ ပြုံးလို့။ နောက်တော့ ရေးနေကျလူ မဟုတ်ဘဲ တခြားတယောက်က ၀င်ရေးတယ်။ ပျက်ပါလေရော။ သူ့ဟာသလုပ်တာ ဆဲသလို ဖြစ်နေတာကိုး။ အချင်းချင်းလဲ စိတ်ဆိုးကြနဲ့။ ဖတ်ရတာ ပျော်စရာ မကောင်းတော့ဘူး။
ကိုပေါ ပြောသလို ရီစရာမှ မဟုတ်၊ ဘယ်အရာမှ အလွန်အကျွံမကောင်းတာ အမှန်ပါပဲ။
လူမဲတွေများလမ်းဟိုဘက်ဒီဘက်ကို လှမ်းအော်နှုတ်ဆက်ပြီး အလကားအော်ရီနေကြတာကလား..ကလေးကျောင်းကြိုသွားရင်လည်းအဖြူမတွေစကားစုပြောပြီးအော်ရီနေတာအဝေးကတောင်ကြားရတယ်၊
ကိုပေါ က ..တဖြေးဖြေးနဲ့ ... သူ့ကိုယ်သူ .. ဆရာကြီးပုံ စံလုပ်နေတယ်...
ပြုံးတာ၊ ရယ်တာ မဲ့တာထက် တော်သေးတယ်လို့ အသန်း ကတော့ ထင်တာပဲ။
ပေါပေါလေးဆီမှာ မပြုံးမရယ်ပဲ မဲ့သွားတယ်ကွယ်။ :(((
မဲ့လိုက်ကာမှ အီးပေါက်မိသွားတာ အကျယ်ကြီး။
မနေ့ညက ငပိသုတ်စားတာ များသွားလို့။
ကိုယ့်အနံတောင်ကိုယ် မခံနိုင်အောင် ပုပ်ဟောင်နံဆော် သွားတာပဲ။
Excuse me နော်။
ရှုလိုက်တော့ ကိုပေါရေ။ ပုပ်ဆော်နံတဲ့ အီးပေါက်တာ ကိုပေါကို လက်ဆောင်ပေးခဲ့ပြီး ပြန်ပါပြီ။
ပြုံးတာရယ်တာထက် ပိုတန်ဖိုးထားမယ် ထင်ပါရဲ့ရှင်။
ကိုပေါရေ… ချိုချဉ်စပ်ခါး အရသာမျှတအောင် မှီဝဲတာက ပိုကောင်းသလိုပေါ့… အမြဲရယ်နေလဲ မကောင်းသလို အမြဲငိုနေလဲ မကောင်းဘူးနော်… ကျွန်မ အတွေ့ အကြုံအရ ပြောရရင် ရယ်စရာရေးရတာ အတော်ခက်ပါတယ်… ကျွန်မအတော်ကို မကျွမ်းကျင်တဲ့ အလုပ်မို့ရေးတတ်သူတွေကို အားကျမိတယ်… ကျွန်မကတော့ ဘလော့ဂ်တွေ လိုက်ဖတ်လို့ပူတာတွေ သိပ်များနေတာတွေ့ ရင် စာဖတ်သူတွေ အနားလေးရစေတော့လို့ပေါ့ပေ့ါပါးပါးလေးတွေ ဖန်တီးမိပါတယ်… အရင် ကျွန်မမှာ ဘလော့ဂ်မရှိခင် စာဖတ်သူဘ၀က ခံစားချက်နဲ့ကိုယ်ချင်းစာမိလို့ ပါ… စာဖတ်သူကို တခုခုလေး ပေးလိုက်ချင်တဲ့ အထဲမှာ လေးနက်တဲ့အတွေးအခေါ်တွေလဲ ပါသင့်သလို ပျော်ရွှင်ကြည်နူးမှုကလဲ တခု အပါအ၀င်ပဲ ဖြစ်သင့်တယ် မိုလား… ကိုပေါရေ… ဒီပို့ စ်လေး ဖတ်ပြီး တခုတွေးမိတယ်… မြန်မာတွေကပဲ သိပ်ရယ်နေကြတာလား… ကျွန်မတို့ ရောက်နေတဲ့ နိုင်ငံကိုက အရယ်အပြုံးနဲတဲ့နိုင်ငံမို့မြန်မာတွေရယ်တာ သိသာထင်ရှားနေတာလားလို့ …
စိတ်ချမ်းသာနေ ၊ ပျော်ပျော်နေနိုင်မှ ရီနိုင်မှာ ။ ရီ ပြုံးနေတဲ့လူက တည်နေ ၊ မဲ့နေတဲ့ လူထက်စာရင် ပိုပြီးတော့ ကြည့်လို့ကောင်းပါတယ် ။ သူ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကိုလည်း အပြုံးတွေကူးစက်စေတယ် ။ သန့်ကတော့ ပျော်ပျော်ပဲ ။ မရယ် မပြုံးတဲ့နေ့ဆိုတာ မရှိသလောက်ဘဲ ။ Boss ကတောင်ပြောတယ် ။ she gotasweet smile တဲ့ ။ ဒီ post ကိုဖတ်ရင်းနဲ့တောင်မှ ရယ်နေမိသေးတယ် ။း)
အူနှိပ်နေအောင် မျက်ရည်များထွက်အောင်ဆိုပြီးဘလော့ခ်ဖတ်မလို့ဟာ ကိုပေါရဲ့ပိုစ့်ကိုဖတ်ပြီး ပါးစပ်ကြီး ဟကာ ပြန်သွားပါတယ်။
u Know What...?
How Can He Laugh Happily...( like Others Myanmar People )..!
Bcoz He Got Ugly-Fat Face.. ( Like Than-Shwe )
လာရောက်ဖတ်ရှုကာ ပေးသွားတဲ့ မှတ်ချက်တိုင်းအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မနေနေနိုင်ရဲ့ မှတ်ချက်ကို ဖတ်လိုက်ရတုန်းကတော့ မျက်စိထဲမှာပါ မြင်ယောင်မိပြီး တော်တော် ရယ်လိုက်ရတယ်။
သိပ္ပံနည်းကျ အထောက်အထားနဲ့ ဆွေးနွေးသွားတဲ့ ဆရာမ မေဓာဝီနဲ့တကွ ကျန်တဲ့ မိတ်ဆွေအပေါင်းကိုလည်း ထင်မြင်တဲ့အတိုင်း မှတ်ချက်ရေးသွားတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မှန်ပါတယ်။ ယေဘူယျ အားဖြင့်တော့ ငိုနေတာ၊ မဲ့နေတာ၊ စူပုပ်နေတာထက် ရယ်မောနေတာ၊ ပြုံးနေတာကတော့ ပိုကောင်းပါတယ်။ ပကတိရိုးသားတဲ့ အပြုံးမျက်နှာဖြစ်ဖို့တော့ လိုတာပေါ့လေ။ သကာလိမ်းကျံထားတဲ့ အပြုံးမျိုး၊ ပေါ့ပျက်တဲ့အပြုံးမျိုးနဲ့ ဟန်ဆောင်ရယ်မောတာမျိုးဆိုရင်တော့ ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်။ ကိုအင်ဒီပြောသလို ရုပ်မာပေမယ့် မယုတ်မာရင် တော်ပါပြီ ဆိုသလိုပေါ့ဗျာ။
ပေါ်လီယာနာလို အမြဲတစေ အကောင်းမြင်တတ်ရင်လည်း စိတ်ညစ်နေတတ်သူတယောက်ထက်တော့ စိတ်ချမ်းသာရမှာပေါ့။
ဒါပေမယ့် ရယ်စရာမောစရာတွေနောက်မှာပဲ အမြဲတစေ သာယာမူးယစ်နေပြီး အလေးအနက်အာရုံထားသင့်တဲ့အရာတွေမှာ မေ့လျော့သွားရင် အကျိုးနည်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကို တွေးမိမြင်မိတဲ့အလျောက် ရေးလိုက်တာပါ။
read the comments below the picture.. :D :) :p
I noticed somethings.. Our bloggers are good at commenting on rival issues and daily life.
When it comes to serious affairs, no body has the courage to comment seriously.
Currently there are many issues going on within and outside our motherland which effect our life.
But there are not many serious debate for these issues.
While we are marching towards Democracy, we should also train ourselves to take these issues seriously and debate them seriously.
If we don't debate on these issues, who will debate for us?
We don't want Junta to control our life and we can't expect elected government to decide for us either. We have to decide ourselves and elected government will execute for us.
Among many other issues, I want to highlight these particular issues to you. Pls blog abt it. Debate abt. Pls.. for our future.
sorry .. i mean "trivial issues"
ကိုပေါကို လူမည်းတွေ အကြောင်းမဲ့ အော်ရီနေကြတာကို ပြချင်တယ်။ ခေါ်ပြီး ပါးနားရင် ဖြတ်ရိုက်ပြစ် လိုက်စမ်းပါဗျာ။ ပါးမရိုက်ချင်လည်း ဟေ့ရောင် နစ်ဂါ ရှက်သယ်ဖက်က်အပ် လို့ ပြောပေးပါလား။
To ငါ့အပေါ်က Anonymous: ရှက်သယ်ဖက်က်အပ်
To Tu Tu, this is so rude, better watch your language. I dont know who the anonymas is, but it doesn't matter. You dont get what he/she meant or you are just too superficial?? The comment made by anonymas may be irrelevant to ko paw's topic but I can see the intention is for our country's good.